Gweta chii? | Kuumbwa uye kudzidza
Maria Jose Roldan | 21/05/2021 12:00 | University
Vanhu vashoma kwazvo vanokwanisa kusiyanisa chinonzi gweta kubva kugweta. Icho chimiro cheye gweta hachinyanyo kuzivikanwa kune veruzhinji, kunyange hazvo chiine kukosha kumwechete kungave negweta. Vaviri venyu munoshanda pamwe chete kuitira kuti gakava riri kutaurwa rifambe zvakanaka.
Muchinyorwa chinotevera isu tichaenda kukubatsira iwe kuti kubva ikozvino uzive ndiani gweta uye ndeapi mabasa avo mukati mematare edzimhosva.
1 Chii chinonzi gweta
2 Kana kuvepo kwegweta kuchidikanwa
3 Gweta rakasiyana papi negweta?
4 Mabasa egweta
5 Mabasa egweta
Chii chinonzi gweta
Gweta ane degree muMutemo uye ndiye anomiririra munhu kana kambani pamberi pedare. Gweta rinoshanda zvakanyanya mubazi remutemo senge maitiro emutemo. Mumiririri wakaitwa negweta unoitwa nekutenda kune simba regweta rakagamuchirwa kubva kugweta.
Kutenda kuvepo kwegweta, zvinovimbiswa kuti mutongo uri kutaurwa uchave wakanangana nekodzero senge kuenzana kwemapato. Hunhu hwemuchuchisi hwakakosha uye hwakakosha zvekuti pasina kuvapo kweumwe haukwanise kutanga imwe mutongo.
Kana kuvepo kwegweta kuchidikanwa
Gweta rinofanira kunge riripo nenzira yekumanikidza mune chero kukakavadzana kwevanhu. Tichifunga izvi, chimiro cheye gweta chine akateedzana ezvisungo:
Iwe unofanirwa kushandira pamwe zvizere nemitumbi yekutonga.
Dzivirira uye umiririre vatengi vakasiyana izvo zvinoda masevhisi ako.
Mirira vatengi ane mamiriro ehupfumi asingatenderi.
Uya nemagwaro akakwana yenyaya yainomiririra.
Mutengi uyo anoda masevhisi egweta, Unogona kuida nenzira dzakasiyana kana nzira:
Kugadzira chikumbiro kukoreji yemagweta.
Kuburikidza nekurumbidza kubva kugweta rakavimbika.
Dare rinoenderana rinoda gweta riri pabasa.
Gweta rakasiyana papi negweta?
Musiyano wacho uri pachena uye ndewkuti gweta ndiye munhu anotarisira kudzivirira mutengi wake. Panyaya yegweta, kuita semumiriri wevatengi uye ndiye anoona nezvekuchengeta zvinyorwa zvese zvinodiwa mukutongwa kwematare. Akadaro gweta hapana chimwe chinopfuura chimiro chemutengi mudare. Kune rimwe divi, rinoendesa zvese zvinyorwa zvinopihwa gweta kudare panguva imwe chete iyo iyo rinopa kuziviswa kwakasiyana kwedare kugweta pacharo.
Nezvayakaipira, chimiro chegweta chiri kutarisira kudzivirira zvido zvakasiyana zvemutengi wake pamberi pedare. Ivo vanoita zvakanangana mumatare akasiyana uye vanoraira mutengi wavo pane zvese zvinodikanwa kuitira kuti mhedzisiro yekutonga ive inobatsira kwazvo.
Basa guru regweta kuronga zvinyorwa zvese izvo zvinodikanwa mune mamiriro eimwe litigation. Icho hachisi chinhu chinopfuura chinongedzo chinofanirwa kuve chiripo pakati pedare, mutengi uye gweta. Ichava nemhosva yemasamanisi akasiyana siyana kana kuziviswa ayo anodiwa munzira chaiyo yemuedzo wakatarwa.
Sezvauri kuona nekucherechedza, chimiro chegweta chakakosha uye chakakosha kana kumwe kumhan'ara kukatanga uye kumhanya zvakakwana. Gweta rinoshanda pamwe chete nemufananidzo wegweta zvine chekuita nenyaya chero yehunhu hwemutemo inoda huvepo hwako
Basa regweta rinoenderana nebazi remutemo raanotungamira. Gweta rakasarudzika mumutemo wevashandi kana wemitero harina kufanana neumwe ane hunyanzvi mumutemo wekuroora. Panyaya yegweta, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti anongove nyanzvi mune zvemitemo uye anogona kumiririra vanhu pamwe nemakambani.
Muchidimbu, chimiro chegweta chiri kumashure zvichienzaniswa neicho chegweta. Nekudaro, sekuona kwawaita, gweta rakakosha kana zvasvika pakutangisa imwe nzira yematare uye zvese zvinogona kumhanya zvinoenderana nemirau. Vose gweta uye gweta vanofanira kushanda pamwechete pane chero chinhu chepamutemo chinoda kuvepo kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Gweta chii?